Mujaahidiinta Alshabaab Oo La Wareegay Diif Kenya. – Calamada.com
Mujaahidiinta Alshabaab Oo La Wareegay Diif Kenya.
calamada July 9, 2016 1 min read
Ciidamada Xarakada Shabaabul Mujaahidiin waxey saacadihii lasoo dhaafay weerar qorsheysan ku qaadeen deegaanka Diif Kenya oo ah deegaan ku yaala dhulka Kenya xooga kaga heysata Somali.
Ciidamada Mujaahidiinta ayaa la xaqiijiyay in dagaal culus ku qaadeen deegaanka oo ay ku sugnaayeen askarta Booliska Nasaarada Kenya’iyadoona markii dagaalka muddo kooban uu socday askarta Nasaarada Kenya gabi ahaan ay isaga carareen deegaankaasi.
Idaacada Islaamiga ah ee Andalus ayaa baahisay in ciidamada Mujaahidiinta habeenkii xalay si buuxda ula wareegeen gacan ku heynta deegaanka islamarkaana ciidamada Mujaahidiinta ay gacanta ku dhigeen ganiimo kala duwan.
Inta la xaqiijiyay ciidamada Mujaahidiinta waxey gacanta ku dhigeen 20 qori oo kala duwan iyo Sanaadiiq ama Sunduuqyo ay ka buuxaan Rasaasta qeybaheeda kala duwan.
Wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in ciidamada Mujaahidiinta saaka si nabad ah deegaanka kaga soo baxeen’waxeyna warar hoose sheegayaan iney jiraan tiro askarta Nasaarada Kenya ah oo lagu dilay deegaankaasi.
Previous: Askarta Xabashida Itoobiya Oo Dad Shacab Ah Ku Dilay Gobalka Bakool.
Next: Dhageyso Barnaamijka Caalamulyowm Ee Andalus 04-10-1437 Hijri.